Barbie fanentanana: Navoakan'i Mattel 17 saribakoly vehivavy tsara tarehy!
Puppet Barbie - angamba ny kilalao tena tiany indrindra amin'ireo zazavavy rehetra eran'izao tontolo izao. Ary tsy mahagaga izany, satria tao anatin'ny 58 taona izay izy dia "nahatonga" olona mihoatra ny iray, ary mbola manohy mampianatra antsika ho femininy, malaza ary malaza izy ankehitriny!
Saingy, indrisy, eo anivon'ireo mpankafy ny saribakoly malaza sy mivarotra eto an-tany, misy ireo izay mitsikera azy. Araka ny fanadihadiana marobe notontosaina, ny sampy plastika dia efa voampanga ho manana fiantraikany ratsy eo amin'ny ankizy, anisan'izany ny fiparitahan'ny neuropathy sy bulimia, ny fomba fiainan'ny mpanjifa ary ny tsy firaharahiana hianatra.
Ary fantatrao, i Mattel dia nahita ny fomba hamaliana izany, ka nanolotra ny ampaham-batana manaraka ny saribakoly fito ambin'ny folo tapitrisa sarimihetsika vehivavy lehibe sy manentana.
Ary tsara tarehy izy ireo!
1. Barbie - mpanakanto Frida Kahlo! Aiza irery ny monobole sy ny volombava?
2. Taratasin'i Amelia Earhart puppet - vehivavy mpanamory fiaramanidina voalohany nanidina ny Oseana Atlantika!
3. Ary eto i Barbie amin'ny filazalazana an'i Martina Wojciechowska - mpanao gazety poloney iray sy mpihanika izay nandresy ny tendron'ireo 7 avo indrindra amin'ny kaontinanta tsirairay!
4. Jereo fotsiny - ity dia Barbie-Helene Darroz - vehivavy chef tsara indrindra eran-tany!
5. Tena tsy nampoizina - ny saribakoly Barbie dia nanjary mpilalao horonantsary sy mpilalao sarimihetsika tamin'ny fomba fijery an'i Patty Jenkins nahomby!
6. Zavatra tsy mampino izany, fa alohan'ny anao dia saribakoly Barbie, natsangana tamin'ny endriny sy ny endrik'i Catherine Johnson - Amerikana mpilalao ara-batana sy matematika izay nandray anjara tamin'ny fandaharan'asa momba ny fiaramanidina Amerikana sy ny habakabaka avy amin'ny fampiasana ny ordinatera dizitaly ao amin'ny NASA!
7. Eny - horonantsarin'ny sarimihetsika Shinoa prima Tang Yuanyuan!
8. Wow - ao amin'ny andian-dahatsoratra "Vehivavy manentana" Mattel dia nahita toerana ho an'ny mpilalao baolina kitra italiana iray avy amin'ny fiaviany Kongoley, mpiaro ny ekipa "Juventus" ary ny ekipa vehivavy italiana Sarah Gama!
9. Ary eto i Barbie ilay mpanamboatra! "Vonona" ho an'i Leila izy!
10. Ohatra mendrika ho an'ny fanindrahindrana sy faniriana marina - Barbie amin'ny endriky ny tompondaka erantany, fencer Ibtihaj Muhammad!
11. Ary indro misy kopian'andron'ny zanakavavin'ilay mpihaza kokokilezy Steve Irwin - Bindi, izay nanolo-tena hiaro ny tontolo iainana!
12. Ary ahoana ny tianao atao amin'i Barbie amin'ny filazan'ny mpilalao sarimihetsika sinoa Shinoa sy ny filozofa Guan Xiaotong?
13. Eny, tena mahafinaritra tokoa ny manana an'i Barbie amin'ny endrika Chloe Kim - tompon-daka mpilalao snowboard ...
14. ... na saribakoly amin'ny endriky ny mpilalao amin'ny gymnastics Gabby Douglas!
15. Sarimihetsika fanentanan'i Barbie dia nanjary maro kokoa noho ilay saribakoly Ava Duverney - talen'ny Amerikana, mpanoratra tantara, mpamokatra sy mpamoaka lahatsoratra.
16. Saribakoly mahafatifaty manana endrika tompon-daka amin'ny volley volley Hui Zhotsi!
17. Fa ho anao sy ny famelezana ny fitokonana - ny 17 taona "barbie inspiré" dia lasa tompondaka erantany amin'ny ady totohondry Nicola Adams!
Ilay mpahaikitra dia mamorona sarimihetsika malaza miaraka amin'ny sariitatra, ary tsy hamiravira ny masony!
Salma Hayek dia naneho hevitra momba ny endrik'i Barbie amin'ny endrik'i Frida Kahlo
Navoakan'i Mattel ny saribakoly Barbie natokana ho an'ny vehivavy miavaka
Ary iza amin'ireo Barbie ireo no tianao hofidiana?
35 ny antony mahatonga ny lehilahy 70 taona tsy hiverina!
27 marika fampakaram-bady mahavariana
Ohatra 35 raha mitafy mihoatra noho ny ADN ny akanjo na tsanganana ao amin'ny pasipaoro!
20 vavy izay te-ho ao amin'ny fampakaram-bady no tsy manam-paharoa indrindra, saingy nisy zavatra tsy nety ...
Lolita in hijab: Nandresy ny Tatsinanana Afovoany Atsinanana ny subculture Japoney
9 modely mahafinaritra mahatalanjona
Nipoitra tamin'ny kalandrie "Pirelli" ireo kintana tsy nokasihiny!
Top 10 fampakaram-bady akanjo amin'ny fomba ofisialy Disney Princesses
Ahoana ny fisafidianana ny sehatry ny lakozia?
Sakafo avy amin'ny holatra
Karazam-bolo fandroana hisafidy?
Sasha Peters bevohoka?
Ny fanadihadiana momba ny fitaovam-pandaminana eo amin'ny zaza no fomba tsara indrindra hahitana ny atao hoe alèjy amin'ny zaza
Solyanka "soup solyanka"
Sakafo ho an'ny kamo - sakafo ho an'ny isan'andro
Corella - fikarakarana sy votoaty
Inona no atao hoe fotoana fivalozana?
Nahoana ny alika no tsy tia saka?
Curd aorian'ny fampiharana
Ny menaka amin'ny alina - tsara sy ratsy